Imisebenzi yinto, yebo, ejabulisa futhi ngesikhathi esifanayo enesibopho. Kodwa, kanjani ukuthi ungaphambuki, futhi impilo yabantu ngabanye ibaluleke kakhulu. Nakuba, ngeshwa, akuwona wonke umuntu ongagcina ibhalansi nokuvumelana phakathi komunye nomunye. Futhi kubaluleke kangaka. Phela, ubuso bomsebenzi nokuphila komuntu siqu akufanele nanini kuhlangane futhi lokhu kuphazamisana. Ngaphandle kwalokho, lokhu kugcwele ukwehluleka okuphelele, kokubili emsebenzini nasemndenini. Yingakho sanquma ukunikezela isihloko samanje kulokho okuthiwa "ifomu lempumelelo", ngenxa yokuthi ngokuqinisekile uzosho ukuthi: "Angizivumeli ukuba ngihluleke! ". Ngakho, isihloko sethu namuhla: "Ukulinganisela komsebenzi nokuphila komuntu siqu". Esihlokweni salesi sihloko, sizozama ukuthola ukuthi singathola kanjani ibhalansi nokulinganisela kulezi zigaba ezimbili zokuphila.
Ukulinganisela emsebenzini nokuphila komuntu siqu, kubalulekile ukuqonda imingcele phakathi komsebenzi nomndeni. Kuphela kuleli cala uzokwazi ukuzithoba wenze okuthandayo futhi ujabule empilweni yakho. Nawa amanye amathiphu ayokusiza ngokuqinisekile empilweni yakho siqu, kodwa futhi futhi esebenza.
- Ikwazi ukuqoqa ukunqoba okuncane empilweni. Wonke "ama-pluses" amancane, ngokushesha noma kamuva, azoba amakhulu. Futhi lokhu kumele kucatshangelwe ngaso sonke isikhathi, bese ungayiqapheli ukuthi ufike kanjani ezindaweni eziphakeme zomsebenzi;
- ungalokothi ume, njalo unesithakazelo ezintweni ezintsha, uqhubeke phambili, uhlele, usebenzise futhi uphumelele impumelelo;
- njalo ubheke amathuba afihlekile. Zama ukuzithuthukisa ebhizinisini osebenzisana ngalo, futhi ngokushesha uma unethuba empilweni - sebenzisa wonke amakhono akho nolwazi olutholile. Uzobona ngokushesha ukuthi inani lakho likhuphuka kakhulu;
- ungakhohlwa ngamakhono akho wokudala, njalo ubonise;
- emsebenzini, cabanga nje ngomsebenzi, bese uzama ukuxazulula konke okunye ngesikhathi sakho sokuphumula;
- Funda ukuthi ungadonsa kanjani emsebenzini wakho ukukhokha nokujabula futhi lokhu kuzokusiza ukuba uphile impilo "ngokumomotheka." Khumbula ukuthi ukujabulela noma yimuphi umsebenzi kuwumkhawulo wokuphelela ongeke wonke umuntu aziqhayise ngakho. Ngakho zama ukuthanda okwenzayo.
Mayelana nempumelelo .
- ungangabazi ukuthi ngeke uphumelele. Kholwa njalo emandleni akho namakhono akho. Phonsa ikhanda lakho yonke imicabango ehlobene neqiniso lokuthi "ulahlekile", ukuthi akukho lutho oluzovela kulo futhi akufanele ulwa. Vele ukholwe empumelelweni, futhi lokhu kuzokusiza ukuba usebenze futhi ujabule;
- kokubili emsebenzini nasemakhaya, yiba isitha esinesithakazelo sobuvila. Yiqiniso, ukuhambisana nombono ophumula kuphela ngesikhathi sokulala nakho akufanele. Thola ibhalansi ephelele phakathi komsebenzi nesikhathi sakho samahhala, ozinikezela emndenini.
Mayelana nabantu abazungezile .
- Ungalokothi ubekezelele izingxabano zakho nozakwethu emsebenzini kumalungu omndeni wakho noma ngokufanayo;
- zama njalo ukuba ngumuntu onobungane nomqotho nabo bonke abanye abantu;
- kholelwa emisebenzini yabantu, futhi ngokuqinisekile kuzokusiza ukuba uziveze futhi uzibonakalise.
Mayelana nezingxabano .
- Funda ukuqeda izingxabano, uma kukhona ithuba futhi kungalimazi ukusebenza, hhayi umndeni. Uma ungajabuli ngento ethile, khona-ke ngendlela ezolile futhi enobungane, yisho kanjalo. Ungadlulisi inkinga ngokujulile, ngoba, ngokushesha noma ngokuhamba kwesikhathi, zonke izikhalazo eziqoqiwe zizophuma futhi ngeke ziholele kunoma yini enhle. Lesi simo sengqondo ezinkingeni kanye nezimo zokuphikisana kuzokusiza ukuba uthole ukuthula empilweni yakho.
Mayelana nothando .
- zama ukugxilisa izinto eziningi ezenzeka kuwe ngothando. Ungaphili ngokwakho, kodwa emndenini, kungenjalo akuthandi futhi kuhlwempu kakhulu. Letha injabulo nenjabulo ekuphileni kwalabo abathandayo, futhi ngokuqinisekile uzoqonda ukuthi awuhlali ngeze. Vele ufunde ukuthanda nokuthandwa.
Mayelana nomndeni .
- cwilisa ubuhlobo bakho nomyeni wakho ngemibala ekhanyayo kanye namathoni wokuhlola. Ngempela, ukusekela kwakhe okuzokusiza, okokuqala, ukuthola lokhu ukulinganisela nokuvumelana kuzo zonke izinkampani nezenzo;
- kholelwa emakhono namandla wezingane zakho futhi ungawafihla ngokunakekelwa ngokweqile. Banike intando yesenzo, hhayi ukubeka imibono yabo nokubukwa kwempilo. Kholwa nje emandleni abo, amandla okunqoba izinkinga namakhono. Ngenxa yalokhu, izingane zakho zizozimela futhi zizokwazi ukwakha indlela yazo yokuphila ngendlela efanele.
- Zama ukuzibeka ngokucacile isikhathi sokuphumula. Khumbula ukuthi iholidi elihle kakhulu liholide elinemibono eminingi. Ngemuva kokubuyiselwa kwamandla kanjalo nokubhizinisi okuthandayo ukuqala ukuzingela. Ngendlela, iholide elinjalo lingaba luhambo lomndeni ukuya emvelweni noma ngisho nokudoba;
- Phakathi namaholidi, ungakhohlwa ukuhamba nohambo lwakho namalungu omndeni wakho noma nje ufihle endaweni edolobheni elisekhaya. Khumbula ukuthi ngesikhathi sokuphumula kufanele ukhulume futhi ucabange ngomsebenzi. Ngempela, konke kunesikhathi saso. Uma kungenjalo, lezi zingxoxo nemicabango kungaphazamisa ngokuphelele ukulinganisela kwempilo yakho ngalesi sikhathi.
- njalo unamathela ezembatho zesitayela esithile. Ngendlela, funda ukugqoka nsuku zonke abathandekayo nabathandekayo. Futhi ngokuqinisekile uzobona ukuthi isimo sakho sengqondo sikhuphukile futhi sihlale kanjani uphawu "oluhle kakhulu." Ungalokothi unake ukuthi yini ongayigqoka namuhla. Phela, bangase bangaboni kusasa.
Mayelana nendlu .
- Yithanda ikhaya lakho, futhi "liyokuphendula" ngenduduzo nobudlova, okumele uyenze ngempela. Ngakho-ke, enhlalakahleni yendlu yakho, ungalokothi uzame ukulondoloza imali. Landela izinto ezintsha zakamuva emklamo wangaphakathi, futhi uzophendulela ikhaya lakho endlini ekhululekile kakhulu, lapho uzosheshisa khona emva komsebenzi ngenjabulo ephelele.
Nakhu, imithetho eyisisekelo, okulandela ukuthi ungathola ibhalansi ephelele yomsebenzi futhi uchaze umugqa ocacile phakathi kwempilo yakho. Ngoba ngaphandle kwalo, ngeke ukwazi ukulinganisela impilo yakho futhi wenze kube yimpumelelo kuzo zonke izinkomba. Khumbula ukuthi ukuvumelana kanye nokuqonda kuphela ngabanye kanye nawe ngokwakho, bayakwazi ukwenza izimangaliso ezinkulu nokufeza izenzo ezingenakubekezela. Sifisela ukuthi uthole ibhalansi yakho nokulinganisela empilweni. Inhlanhla!
Indlela yokunquma izinga lezinyosi ekhaya
Indlela yokugcina idayari encwadini?
Uma ufuna isixha sembali sime isikhathi eside
Indlela Etihambelanayo Esimemezelayo Ekhuthaza Ubuhlobo Bomngani Nebhizinisi
Yini okufanele inikeze ngokuzalwa kwengane?
Ushizi onzima we-Parmesan wase-Italy
Inani lokudla okunomsoco nokuphilayo kwamakhabe
Amagilebhisi e-yogurt jelly
I-Horoscope ye-Aquarius Owesifazane ka-Agasti 2016
Isinkwa sokuzenzela nge anyanisi
Imikhiqizo yokuqinisa i-Vascular
Ukukhetha izinkinga zokubeletha kwabesifazane emva kweminyaka engu-35-40
Amakhukhi anezithelo ezihlosiwe
Izinzuzo kanye nokuphikisana kwe-lymphatic water massage massage
Yini okufanele ngiyenze uma umsebenzi ude kunesikhathi?
Izincomo eziwusizo empilweni yabesifazane
Shintsha isimo sengqondo esibi ekubukeni
Ungasusa kanjani amafutha emilenzeni? Imithetho eyisisekelo.